Kenya oo 14 Qodob kasoo saartay Diidmada Dacwadda Kiiska Badda ee Somaliya kala dhaxeysa (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya ayaa soo bandhigay War-saxaafadeed ku sabasan sababta ay ku diiday Dacwadda ay Soomaaliya ka gudbisay ee Kiiska Badda iyo ka qeybgalka dhageysiga Dacwadda 15-24 March 2021.
Qodobadda ugu muhiimsan ee Kenya ku doodeyso oo qaarkood aanay macquul ahayn, qaar kalena wax shaqo ah ku lahayn Kiiska Dacwadda ee horyaalla Maxkamadda Cadaaladda UCJ, ayaa waxaa ka mida:
1- Inaysan Maxkamadda cadaalad ahayn, sidaasina ay u qaadatay inaysan ka qeybgelin dacwadda hadda ka socota si ay u difaacdo qaranimadeeda iyo xuduudkeeda.
2- Inay Soomaaliya wado is-balaarin dhuleed, maxkamadduna uu ku sugan yahay Garsoore C/qawi Yusuf oo Soomaali ah, horeba shir ugu metelay dalkiisa.
3- Inay labada dal murankooda ku xaliyaan si wadhadal ah, sida ku cad heshiiskii is-fahamka Kenya iyo Soomaaliya ee la saxiixay 2009.
4- Inay Maxkamadda ICJ saameyn ku yeesheen gacan saddexaad (dalal) oo dano dano Ganacsi leh oo riixaya Soomaaliya.
5- Inay Kenya taageero siiday dadka Soomaalida, ayna ciidamo badan uga dhinteen Soomaaliya, iyagoo difaacaya nabadda, kana mida ciidamada AMISOM.
Previous articleDaahir Geelle: “Haddii Farmaajo fahamkiisa dowladnimadu kusoo koobmay qori amaankiisa furan yahay..”
Next articleFarmaajo oo Ciidamo, Hub iyo Gaadiid Dagaal oo hor leh u diray Gobilka Gedo xilli la filayey gargaar (Sawirro)